Posted by ကလိုစေးထူး at 7:59 PM
Mar 29, 2008, 9:45:00 PM
Mar 29, 2008, 9:59:00 PM
ကိုစေးထူးဒုက္ခကို မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း ပြုံးမိပါရဲ့ဗျား။
Mar 29, 2008, 10:57:00 PM
Mar 30, 2008, 4:18:00 AM
ကိုစေးထူးရေ.. ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ကိုစေးထူး ဒုက္ခက မသေးဘူးလို့ တွေးမိတယ်...
ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိနေသေးတာပဲနော်... လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုတာ ဒါပဲထင်ပါရဲ့..
Mar 30, 2008, 7:34:00 AM
Yes I can imagine your feeling when you listening from him. I have also same situation. Someone said you never go out, never dress nicely, never eat at nightclub and don't know "how to enjoy life". I ask them back that "what can enjoy life".
“လူတွေကလဲ ညီမှမညီတာ၊ စီးပွားရေးပဲ လုပ်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီ ရရင်တော့လဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ချင်တာပေါ့”.....။
ကိုကလိုစေးထူးရေ...ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျ၊ နော!း))
Thanks for your wonderful post. I thought of writingapost about overseas Burmese like the guy that wasted your time and energy.
The worst part is distraction. You may not be able to focus on your intended work.
I'm sorry to post in English as most of the comments posted in Burmese come out with distorted fonts.
Mar 31, 2008, 12:08:00 AM
ကိုစေးထူးရေ...ဇလိုက်ဇရောဆိုတာ ပြောတော့လွယ်ပေမယ့် အဲဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျတော့ အတော်ခက်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။
Mar 31, 2008, 7:17:00 AM
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ပေါက်ကွဲထားတဲ့ စာကိုဖတ်ပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရသလို ကျနော့်မှာ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေလိုမျိုး တခြားသောသူတွေမှာလဲ ရှိနေကြတာကို သိရလို့ အားမငယ်တော့ဘူးဗျာ။ :D
Mar 31, 2008, 10:46:00 PM
အင်း.. အထက်က ကိုစေးထူးပြောသလိုပဲ.။